यी ७ कुरा भुलेर पनि भगवानसँग नमाग्नुहोस, नत्र अशुभ हुनेछ ! - Nawalpur Dainik
१.पहिलो हो , शिव, गणेश अनी भैरवलाई तुलसी चढाउनु हुँदैन । २.त्यसैगरी दास्रो हो , स्नान नगरी तुलसीको पातलाई टिप्नु हुँदैन । शास्त्र अनुसार यदि कुनै व्यक्ति ननुहाइ तुलसीको पात टिप्छ भने पुजा गर्दा यस्तो पात भगवानद्धारा स्वीकार हुँदैन ।३.तेस्रोमा तुलसीको पातहरुलाई ११ दिनसम्म बासी मानिँदैन । यसको पातहरुमा जल चढाएर पुन भगवानलाई अर्पित गर्न सकिन्छ ।
४. त्यसैगरी चौथोमा यो दिन बिहिवार, एकादशी द्धादशी, संक्रान्ति तथा साँझमा तुलसीको पात टिप्नु हुँदैन ।५.पाचौमा सुर्यदेवलाई शंखको जलबाट अघ्र्य दिनु हुँदैन । भने बुधवार अनि बिहिवार पिपलको रुखमा जल चढाउनु हुँदैन । त्यसमा पनि दुवोलाई भने बिहिवार टिप्नु हुँदैन ।
सरोज खनालको फेसबुक अकाउन्टबाट गायक श्रेष्ठलाई ह्याकरको यस्तो मेसेज
काठमाडौं । चलचित्र निर्देशक तथा कलाकार दीपाश्री निरौला र कलाकार सरोज खनालको फेसबुक अकाउन्ट ह्याक भएको छ।
निरौलाको फेसबुक अकाउन्ट ह्याक गरी फेसबुकका साथीहरुबाट एक लाख रुपैयाँ मागिएको छ भने कलाकार खनालको एकाउन्टबाट विभिन्न व्यक्तिलाई पैसा माग गरिएको पाइएको छ।
गायक सन्जय श्रेष्ठले आफूलाई पनि खनालको एकाउन्टबाट म्यासेज आएको भन्दै स्क्रिनसट सार्वजनिक गरेका छन्।
यस्तो छ सरोज खनालको फेसबुक अकाउन्टबाट गायक श्रेष्ठलाई आएको म्यासेज।यस्तै, समाजसेवाी इशा गुरुङले पनि आफूकहाँ मेसेज आएको बताएकी छन्।
Prevमलाइकाले बाथरुमबाट निस्किएर पाइन्ट माथि सार्न बिर्सिएपछि
Nextवलिवूड नायिकालाई समेत पछि पार्ने नेपालका यी नायिकाहरु हेर्नुस तस्बिर सहित